Zeevou's Features | Fanamendrehana fitantanana fananana
Zeevou's Features - Fanaraha-maso fitantanana fananana
Zeevou's Features dia mikendry ny hampitombo ny habetsaky ny mandeha ho azy, hahafahanao manafaka ny fotoanao ary mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao. Ny endri-javatra asehontsika dia mivoatra hatrany hanomezana ny mpanjifanay ny tsara indrindra amin'ny fitantanana automatique momba ny fananana.
Misy ivon-toerana manodidina ny mandeha ho azy
Ny ekipanay ao Zeevou dia niasa mafy namorona rindrambaiko izay miatrika ny olan'ny PMS tena izy. Ny endritsika dia misy fiantraikany lehibe amin'ny taonantsika traikefa amin'ny indostrian'ny trano fanompoana. Ankoatr'izay, manome lanja be ny hevitra sy fifampidinihana amin'ireo mpitantana fandraisam-bahiny lavitra amina toerana maro izahay. Manangona fanamarihana tsy tapaka avy amin'ny mpampiasa anay izahay mba hahazoana antoka fa manao laharam-pahamehana ny momba anay fandaharam-potoana fampandrosoana ho an'ny filan'ny mpiara-miombon'antoka mivoatra.
Ny PMS misy toerana maro an'i Zeevou dia ahafahanao mitantana ny fanananao rehetra amin'ny fidirana afovoany iray.
Hamarino fa ny famandrihana tsirairay dia manamarika ny boaty rehetra, na avy aiza na avy aiza.
Tantano ny check-in rehetra anao - boatina fanalahidy, hidin-trano maranitra na KeyNest - amin'ny alàlan'i Zeevou.
Ampitomboy ny famandrihana mivantana anao miaraka amin'ny tranokalanay SEO-friendly miaraka amin'ny fitaovana fandinihana ambony.
Atosiho ny tahan'ny fahaizanao sy ny fahazoanao azy amin'ny fotoana tena izy ho amin'ny fantsona 200 mahery miaraka amin'ny fifandraisana API roa-mahery.
Avelao ny mpikarakara tokantranonao hahazo vaovao mora foana mandritra ny diany ary manampy amin'ny fitantanana ny hofan-trano.
Ny fizotran'ny fandoavam-bola an'i Zeevou dia ahafahanao mifehy ny fandoavam-bola, amin'izay hanatsara ny fivezivezena.
Midira amin'ny CRM vahiny maloto ao anaty trano izay mandeha ho azy ny automatique fanangonana adiresy mailaka ary manangana angon-drakitra mifanaraka amin'ny GDPR nefa tsy misondrotra rantsan-tànana.
Zeevou dia mamela anao hitazona mora foana ny olana rehetra amin'ny fikojakojana ary manamarina ny fivoarany manomboka A ka Z.
Zeevou dia mamela ireo mpampiasa vola sy tompon-trano izay miara-miasa amin'ireo orinasam-pitantanana fanofana fialan-tsasatra hijery ny vola azony amin'ny tena izy.
Mandrosoa mankany Zeevou araka izay azo atao amin'ny alàlan'ny fampiofanana premium anay sy ny fanohanan'ny tetezamita.
Zeevou dia ahafahanao mandeha ho azy ny kajy tombony ho anao sy ho an'ny tompona izay hitantananao.
Tantano amin'ny foibe ny asanao rehetra, ary ataovy mandeha automatique ny ampahany lehibe amin'ny andraikitro isan'andro.
Manolora traikefa vahiny mahafinaritra miaraka amin'i Zeevou ary jereo ny fandrosoanao mitombo hatrany amin'ny tanjaka!
Zeevou dia mamela anao hametraka mora foana ny tahan'ny habetsahana ho an'ny fananana maro na hanosika ny vidiny amin'ny fampiasana fitaovana vidiana mavitrika.
Tantano amin'ny fomba mahomby ny asanao rehefa mandanjalanja ny orinasanao manofa fialan-tsasatra amin'ny karazana kalandrie 2 anay.
Ampitomboy ny laharan'ny voajanahary ao amin'ny tranonkalanao amin'ny valin'ny karoka miaraka amin'ny fanaovan'i Zeevou bilaogy voaorina.
Ataovy mandeha ho azy ny famoahana faktiora ho an'ny vahinin'ny vahininao, vola fanampiny ampiana, fiampangana amin'ny petra-bola fiarovana, sns.
Arovy ny tenanao amin'ireo hosoka sy saribakoly amin'ny alàlan'ny endrika mampiavaka ny Zeevou 3-D Secure Links.
Farito araka ny tokony izy ny vola miditra sy ny fandaniana, ny tombom-barotra amin'ny ankapobeny ary ny fizarazarana tombony marina misy eo amin'ny antoko.
Manangana sy mikolokolo fifandraisana amin'ireo mpivarotra orinasa, nefa tsy manadino ireo fepetra takiny manokana.
Araho tsy ny antsipirian'ny tompona ankehitriny ihany fa ny antsipirian'ny ho avy ihany koa.
Manome anao fanampiana Premium izahay satria fantatray tsara fa miankina amin'ny anao ny fahombiazantsika.
Fantaro tsara ny vahininao alohan'ny hanomezanao fidirana amin'ny fanananao miaraka amin'ny fanampian'i Zeevou.
Mihazakazaha marika mihoatra ny iray avy amin'ny fidirana tokana, mamorona tranokala marobe mandritra ny fotoana fohy, ary mitantana mora foana ny rehetra.
Ataovy mandeha ho azy ny fanangonana, ny famoahana ary ny fiverenan'ny tahiry fiarovana amin'ny alàlan'ny fanodinana famandrihana mandeha ho azy.
Ampidiro ny tranonkalanao manokana na ny an'ny Zeevou miaraka amin'ny motera fandefasana streamline anao handefasana famandrihana mivantana bebe kokoa.
Ampitomboy ny tombom-barotrao amin'ny fivarotana vokatra sy serivisy fanampiny amin'ny fampiasana fanampiana an'i Zeevou.
Mitondrà fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny tranokalanao famandrihana mivantana amin'ny alàlan'ny fametrahana sy fampisehoana vidiny mihena.
Hamarino fa ny fandaniana rehetra amin'ny fanananao marobe dia voatanisa ary mifanaraka amin'ny singa marina.
Ampiasao ity endri-javatra tsy manam-paharoa ity hitantanana ny hofan-trano isan-kariva, isan-kerinandro ary isam-bolana avy amin'ny fidirana afovoany iray.
Navoaka isam-bolana ny fiasa vaovao, satria tanjonay ny ho lohalaharana amin'ny famolavolana ny indostria.
Manokà tontolo vaovao hatsaran-tarehy, fahatsorana ary mety ho an'ny orinasanao mandray vahiny!
Ny fampiasa anay dia miompana amin'ny fihodinanan'ny asa andavanandro. Zeevou mandrindra fitantanana fitantanana sy fandaminana mba hahamora ny fiainanao. Our integrations miaraka amin'ireo mpamatsy rindrambaiko mpiara-miasa hafa dia mamela anay hanodina ny orinasanao manomboka amin'ny A ka hatramin'ny Z. Manome mihoatra ny 200 channel, ary ny fahazoana famandrihana mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fifandraisanay API 2-lalana, tafaverina izahay.
Indray mandeha ny famandrihana dia mahatratra an'i Zeevou, ny tokana Dingana fanamafisana ny famandrihana 5-dingana mandray an-tanana. Io dia miantoka ny fanodinana ny famandrihana anao na iza na iza loharano. Ny vahiny rehetra dia takiana amin'ny famenoana endrika fisoratana anarana an-tserasera, fandoavam-bola ary fametrahana antoka azo antoka amin'ny fijanonany. Matoky tanteraka mampiasa 3-D azo antoka rohy fandoavam-bola, sonia ny Terms sy ny fepetra ary omeo ny karapanondrony. Ny torolàlana momba ny fizahana dia mivoaka raha tsy rehefa voahaja ny fepetra rehetra takiana aminao. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manana fiadanan-tsaina amin'ny fahalalana fa tsy misy fidirana tsy ara-dalàna mankany amin'ny fanananao homena olona mety hampidi-doza.
Ny rafitray koa dia mandeha ho azy ny asany rehetra isan'andro. Mampihena ny aretin'andoha ary mampihena ny vintana amin'ny hadisoan'ny olombelona. Manarona fikarakarana trano, fikojakojana, fitehirizana boky sy fifandraisana mandeha ho azy izahay.
Ny fiasa mandroso dia misy fampiharana finday ho an'ireo mpikarakara trano. Fahazoan'ny mpiasa ambaratonga marobe, ary koa vavahadin-tsoratry ny tompona tatitra tena izy mba hahafahan'ny mpampiasa vola manara-maso ny vola azony nefa tsy mandray ny fotoananao rehetra.